Ntughari ọgwụgwọ Conversion: Dr Con Kafataris | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vent na - egbochi mmerụ ahụ, na - akwalite ikpe ziri ezi: nkatọ
Site n'aka Dr Con Kafataris (Jan 2020)
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, otu n’ime ihe ndị na-akpata arụmụka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndụ Australia abụrụla ‘ihe gbasara mmekọahụ, na ndagide nwoke na nwanyị nke a na-akpọkarị dysphoria nwoke ma ọ bụ transgenderism.
Echiche dị ugbu a na-elekọta mmadụ / ọgwụ / ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ka anyị kwenye na ntụgharị uche mmekọahụ na ndagide nwoke na nwanyị bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa, kpebiri biologụ na enweghị ike ịgbanwe. Echiche a bu ihe nlere, ma obu ‘ogwu’, ma obu mbo inyere ndi mmadu choro ikpochapu udiri mmekorita nwoke na nwoke ma obu obi ojoo, a na-eleta ya dika ‘ihe nzuzu’ na ‘mmanu agwo’. N’ezie, n’oge na-adịbeghị anya gọọmentị dị iche iche na steeti Australia amalitela usoro nke imejọ ụdị ọgwụgwọ ndị a
Ma ọ nwere ike bụrụ na ụfọdụ ndị na-ewute ndị mmadụ inwe mmasị na nwoke ma ọ bụ nwanyị ma ọ bụ ndagide nwoke ma ọ bụ nwanyị, ha chọrọ enyemaka iji kpochapụ ha? Otu ọ dị, ihe bụ eziokwu bụ na ndị dị otu a dị adị ma ha egosipụtawo ikike niile dịka anyị niile nwere mgbe a na-eche nkụ mmụọ anyị chọrọ: ha chọọ enyemaka. Amalitewo izobara omume na usoro eji eme ihe dika 'ọgwụgwọ mgbanwe'.
Otu n'ime ihe akpọrọ ihe akaebe na gọọmentị ndị a tụkwasịrị obi bụ nkwupụta sitere na Mahadum La Trobe akpọrọ 'Mgbochi Nsogbu, Justicekwalite Ikpe Ziri Ezi' (PHPJ) nke egosiputara dị ka enweghị nkwanye ùgwù ọ bụla maka ịgbanwe ọdịdị mmekọahụ ma ọ bụ mgbagwoju anya nke nwoke. Ọzọkwa, nke a, ọ dị ka nke doro anya ma gbabie dịka mgbasa ozi na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-eme ka anyị kwenye? Ọ bụ ezie na akwụkwọ a (PHPJ) na-asacha ederede zuru oke banyere LGBT 'ọgwụgwọ ntụgharị' ọ bụ akwụkwọ nwere mpịakọta dị oke n'ọtụtụ ọkwa. Ọ nwere ntụpọ n'ụdị usoro ya, ọ nwere ntụpọ na yabụ ya mere nkwubi okwu ya enweghị ike ịnyere aka kama enwere ntụpọ. O di nwute, a na-ere ya dika ihe omuma, nke omimi ma nke ziri ezi banyere usoro mgbanwe n’Austria.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịkọwa nke ọma na peeji iri asatọ n'ogologo, ma nwee ike ịchọpụta akụkọ nke ụfọdụ ndị sonyere na omimi, ọ bụghị ihe nnọchi anya nke 'ọgwụgwọ ntụgharị' na Australia. Enwere ọtụtụ nsogbu ma aga m ewetara ha isi ihe n'okpuru.
Ejiri flawa maka nyocha zuru oke banyere okwu a.
Akuko a abughi ihe nyocha zuru ezu banyere oru oma ma obu enweghi ya nke usoro itughari. O bu ihe nlebara anya banyere ihe omuma nke ihe nlere ahu anya, na ihe omuma ya n’ebe ndi mmadu ahuru hotara. Nke a agaghị abụ ihe ijuanya dịka onye edemede ndu bu Timothy Jones, onye ọpụrụiche bụ akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị sayensị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akparamaagwa ma ọ bụ ọgụgụ isi. Ya mere, n'agbanyeghị na ọ nwere uru ụfọdụ maka ọdịnaya akụkọ ọ bụla, ọ bụghị akụkọ sayensị ma ekwesighi iji ya duzie mkpebi dị mkpa dịka ịhapụ ma ọ bụ imebi usoro ọgwụgwọ ọ bụla.
Ndị ode akwụkwọ gbara ndị 15 ajụjụ ọnụ, ndị nwere ahụmịhe na-adịghị mma na ọgwụgwọ ntụgharị. Ha choputara 15 ndia site na mgbasa ozi LGBT ma kwuo na ha 'buru ndi nnọchi anya nke okpukpe na ihe ngosi LGBT na Australia'. Ha malitere site na iji ihe atụ nke 50 mana wepụrụ 35 n'ime ha maka ebumnuche dịgasị iche.
A na-atụle ahụmahụ nke mmadụ iri na ise a n'ụzọ zuru ezu n'isiakwụkwọ abụọ nke akụkọ ahụ. Naanị otu onye a gbara ajụjụ ọnụ kọwara ọfụma banyere 'ọgwụgwọ azụ' nke mere '' 15s '. Agbanyeghị nkọwa ya zuru oke banyere itinye gị n'ụlọ ọgwụ psychiiki na 'a na-ejide onwe m ịnweta electrode na labia', ụlọ ọgwụ ahụ, akọwapụtaghị ụbọchị ma ọ bụ dibịa ahụ. Nke a na - eme ka a ghara ịchọpụta ma ihe a emeela ma ọ bụ na ọ kaghị. N'iburu n'uche na akaụntụ ya na-akọwa mwakpo obi ọjọọ wakporo mmadụ ya, nkwenye izi ezi nke akaụntụ dị otú ahụ dị mkpa.
Ọ dị ka n'ọtụtụ, usoro ọgwụgwọ ndị ahụ bụ omume ndị isi dị ka ikiri vidio, ogige ụlọ ọrụ, ikpekọ ekpere ọnụ, ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ na otu nkwado. Ndị a bụ omume nyeerela ọtụtụ nde mmadụ aka gburugburu ụwa n'ọtụtụ afọ iji merie nsogbu site na iru újú n'ihi ọnwụ nke ndị ha hụrụ n'anya, ịgba alụkwaghịm, ihe ndị riri ahụ, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. N'ihi nke a edoghi ndị mmadụ ụdị ụdị ọgwụgwọ ọ bụla nke a agaghị ewere dị ka 'ihe bụ isi' na okirikiri ije ozi. Nke a gụnyere ije-ozi nke ekpere na ọrụ mgbapụta.
Ndị edemede ahụ gbara onye ọ bụla kwuru na ya enwetala mgbanwe na-adịgide adịgide site na 'usoro ọgwụgwọ ntụgharị'. Eziokwu bụ na enwere ndị dị otú a na Australia na enwere ihe karịrị 15 n'ime ha. Havefọdụ abanyela aka nwoke na nwanyị idina nwoke na nwanyị ogologo oge ndị ọzọ ahapụwo nwoke ma ọ bụ nwanyị na ndị ọzọ na transgender ha na-adị ogologo ndụ. N’agbanyeghi nke a bu ezigbo amaara onye obula banyere okwu a, ndi dere PHPJ leghaara ha anya.
Ọ ga-amata onye ọ bụla na mmadụ enweghị ike iwepụta echiche ziri ezi na echiche zuru oke banyere ihe ọ gwụla ma otu onye nyochara akụkụ abụọ nke akụkọ. Nkwupụta ahụ leghaara ndị nwere mgbanwe na-adịgide adịgide anya. Nanị nkọwa ezi uche dị na ya maka akụkọ a bụ ihe ọjọọ megide ndị dere ya. Ya mere, a gaghị ele ya anya n’ihu.
Ihe Akaebe A Ziri Ezi
Ahịrị nke mbụ dị na ngalaba 1.1 kwuru:
'Nnyocha nke akparamaagwa emeela ihe akaebe banyere ileba anya na omume nke tụgharịrị edegharị nke ndị LGBT anaghị arụ ọrụ ma ha bụ ihe na-emerụ ahụ na enweghị isi. (mesiri ike kwukwara)
Ugbu a bụ okwu siri ike. Ihe ọ na - ekwu bụ na ọ 'karịrị obi abụọ' na 'ọgwụgwọ ntụgharị' 'anaghị arụ ọrụ. N'inye ọdịdị zuru oke nke nkwupụta ahụ, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ịtụ anya na iji akaebe zuru ezu na nrutu aka kwadoo ya.
N’ezie, naanị ntụnye aka nke ndị dere bụ nkwupụta ọkwa si n’aka Australian Psychological Society 2015 ‘APS Position Statement’ banyere iji omume akparamaagwa nke na-anwa ịgbanwe echiche mmekọahụ. Ọ na --eme nkwupụta ndị a siri ike ma doo anya:
'Ndị APS na-emegide ụzọ ọ bụla maka omume mmụọ ma ọ bụ nyocha nke na-emeso ndị nwanyị nwere mmasị nwanyị, ndị nwoke nwere mmasị nwoke na ndị nwere mmekọ bishọp dị ka ndị nwere nsogbu. APS na-emegidekwa usoro ọ bụla maka omume mmụọ ma ọ bụ nyocha nke na-anwa ịgbanwe mmadụ inwe mmekọahụ. Enweghi nyocha ihe omumu nke ndi mmadu noo na nyocha nke oma nke nwere ike 'igbanwe' ya na uzo nke nwoke na nwanyi
Ọzọkwa, ị ga-atụ anya na nkwenye siri ike, nke zuru oke ga-akwado site na ihe akaebe siri ike. Mgbe ị na-enyocha amaokwu ndị enyere, enwere naanị otu ọmụmụ nke Shidio & Schroeder si na 2002 nke n'onwe ya bụ 'akụkọ ndị ahịa'.
Ihe APSJ ma ọ bụ ndị dere PHPJ ekwughị bụ na enwere ụfọdụ nyocha nyocha nke na-edepụta ihe ịga nke ọma nke mgbalị iji gbanwee usoro mmekọahụ na mbipụta ahụ ma gosipụta ya na nnọkọ ntụgharị uche na US. Ihe kachasị nso na nke a bụ akwụkwọ nyocha nke Whitehead na Santero (July 2018) edepụtara uru dị ukwuu site na usoro ntụgharị site na iji ntakịrị ihe mmerụ ahụ. E nwekwara ọtụtụ ihe akaebe ndị ọzọ banyere ọkwa dịgasị iche iche na-egosi na otu ìgwè mmadụ na-erite uru na 'usoro ọgwụgwọ ntụgharị' nke ndị American Psychological Association kwetara na akụkọ banyere 2009 banyere ọgwụgwọ ntụgharị.
Iji bụrụ eziokwu, ndị dere PHPJ na-ekwurita nke a na ntinye aka na akụkọ ha mana ekwughi ya na otu akụkọ ahụ. N'ezie, ọ gụchaa akụkọ a, anaghị enye onye na-agụ ihe ọ bụla na-abụghị 'ọgwụgwọ ntụgharị bụ ihe na-adịghị mma ma ọ naghị arụ ọrụ'. Ihe odide ntụkwasị a kpọrọ ‘psychiatry and cure therapy’ nwere isiokwu yiri ya mana ọ nabataghị otu nnyocha na-egosi na ọ bara uru ọgwụgwọ ọgwụgwọ. Na mgbakwunye, ndị edemede rụpụtara ụzọ ndị doro anya na-atụ aro na ọgwụgwọ ntụgharị abaghị uru dịka akụkọ APA 2009, na-ekwughị okwu na ndị isi na-enye aka na akụkọ ahụ, Diamond na Savin-Williams na-ekwuputa ngwa ngwa na ntụgharị uche nke inwe mmekọahụ bụ mmiri.
Ndị dere rụtụrụ aka na isi site na Mahadum Cornell akpọrọ 'whatwe amaghị' (Disemba 2017), nke ha na-ekwu na-egosi na ọgwụgwọ ntụgharị anaghị arụ ọrụ. Mgbe mmadụ nyochara isi okwu ya, anyị na-achọpụta na ọ na - ekwu:
'Anyị chọpụtara nyocha nyocha ndị ọgbọ nke 47 nke mezuru usoro anyị maka ịgbakwunye na ihe ọmụma banyere ma usoro ọgwụgwọ ntụgharị (CT) nwere ike ịgbanwe usoro mmekọahụ na-enweghị mmerụ ahụ. Iri na atọ nke ọmụmụ ndị ahụ gụnyere nyocha izizi. N'ime ndị ahụ, 12 kwubiri na CT enweghi ike na / ma ọ bụ na-emerụ ahụ, ịchọta njikọ nke nkụda mmụọ, igbu onwe onye, ​​nchekasị, ikewapụ mmekọrịta mmadụ na ibelata ikike nke mmekọrịta. Naanị otu ọmụmụ kwubiri na ntụgharị mgbanwe ntụgharị uche nke mmekọahụ nwere ike ịga nke ọma-ọbụlagodi na pere mpe nke ndị sonyere ya, ọmụmụ ihe ahụ nwere ọtụtụ njedebe: nyocha ya niile gosipụtara dị ka nke okpukpe ma gbakwasị ụkwụ na akụkọ banyere onwe, nke nwere ike ịkpa ike na. ntụkwasị obi. Ọmụmụ ihe 34 fọdụrụnụ anaghị eme mkpebi siri ike banyere ma CT nwere ike ịgbanwe ntụgharị uche mana ha nwere ike ịnye nkọwa bara uru iji nyere ndị nduzi aka ịgwọ ndị ọrịa LGBT. '
Ihe kariri 70% nke ihe ọmụmụ nyochara emeghị mkpebi siri ike banyere ma ọgwụgwọ ntụgharị nwere ike ịgbanwe echiche mmekọahụ. A kọwara 70% otu a iji na-enye 'ihe ngosi bara uru' iji nyere ndị na-eme ọrụ aka. Nke a bụ n'ikwu na 'anyị amaghị'. Iwu gọọmentị kwesiri ịdabere na 'Anyị amaghị'? Ekwesịrị ịgwọ ọrịa, ebe enwere opekata mpe ihe ọgbaghara na-egosi na ọtụtụ puku mmadụ gburugburu ụwa eritela uru n'enweghị mmerụ ahụ, 'bụrụ ndị amamikpe dabere na' Anyị amaghị '? Azịza ezi uche dị na nke a bụ 'ee ha ekwesịghị.' Ma nke a bụ nkenke ihe ndị odeakwụkwọ nke PHPJ ga-eme ka anyị kwere.
Onweghi onye na - atụ aro na usoro SOCE ma ọ bụ usoro ntụgharị nwere ike 'gbanwee' onye ọ bụla na - achọghị ya, mana enwere nnukwu ụlọ ọgwụ na ihe akaebe na, maka ndị chọrọ enyemaka na agụụ mmekọahụ na - achọghị ma ọ bụ mgbagwoju anya okike, na ụfọdụ ọgwụgwọ ụzọ dị iche iche ahaziri iche dị ka SOCE nwere ike isi nyere ụdị ndị ahụ aka imezu ebumnuche ha na ibelata ma ọ bụ ijikwa SSA ma ọ bụ GD ndị a achọghị.
Eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị nwere ụdị agụụ mmekọahụ na-achọghị achọta eritela uru site na ọgwụgwọ ntụgharị bụ nke edekwara nke ọma na akụkọ 2017 na US Federal Trade Commission nke akpọrọ 'N'okwu nke ha: aghụghọ na aghụghọ' site n'aka ndị otu Task Force maka Agwọ Agwọ. A kọwara nzukọ a dị ka “mmekorita nke ndi okacha amara, ndi dibia, ndi dibia, ndi otu oha na eze na ndị ahịa / ndị ọrịa psychotherapy / site na n'ofe United States America. Ebumnuche ha bụ inweta nchekwa ọgwụ nha anya maka ndị ahịa na-enwe oke nhụjuanya maka ụdị okike nwoke a na-achọghị na esemokwu nwoke na nwanyị"
Ọ ga - egosi na enwere ọtụtụ ndị ọkachamara ahụike siri ike na ikikere na US ndị kwenyere na enwere ike ịgwọ ụdị mmasị nwoke na - achọghị. Kedu otu ọ ga - esi kwe omume maka njikọta dị otú a, ọ bụghị naanị ịdị adị, kama iji kpughee mkpesa na Kọmitii Azụmaahịa United States, belụsọ ma ha enwekarịrị ihe akaebe maka nkwupụta ha. Nyochaa ederede nyocha nke ọma gosiri na ha nwere ezigbo ihe akaebe maka ihe ha na-ekwu. E bipụtara akụkọ a na akụkọ APA 2009 XNUMX n'ihu PHPJ ma ha enweghị nkọwa.
Enwere ohere abụọ maka nke a:
1.) Ndị dere PHPJ amaghị banyere ịdị adị ha, nke na-ekwesịghị ilele akụkọ banyere ya anya nyocha dị ka akụkọ na ihe akaebe maka ma ọ bụ megide ọgwụgwọ ntụgharị. Ekwesighi iji ya mee ihe omuma ya.
2.) Ndị dere PHPJ maara ịdị adị ha ma họrọ ịghara ịkọ ya. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ịkpa ókè nke ndị edemede a, yabụ na enweghị ike lee akụkọ ahụ anya dị ka ebumnobi na nke eleghị anya n'ihu.
Ya mere na ichikota, ndi ode akwukwo etinyela usoro banyere okirikiri.
1.) Ha eburula ụzọ site na mbido na ntụgharị mgbanwe anaghị arụ ọrụ
2.) Ha gosiputara naanị ihe akaebe na-akwado echiche a.
3.) Ya mere, o ghaghi iju gi anya na ihe akuko ndi ozo gara n’ihu igosi nke a
le ’, ọgwụgwọ ntụgharị anaghị arụ ọrụ.
Mmechi Echiche Ziri Ezi
Mgbe mmadụ tụlechara eziokwu ahụ bụ na PHP nwere ntụpọ, usoro na ntụpọ ya, ọ gaghị abụ ihe ijuanya ịhụ na nkwubi okwu ahụ enweghị ntụpọ. N’ezie, ọnweghị ụzọ a ga-esi bụrụ ndị na-enweghị ntụpọ, ebe eziokwu ahụ bụ na ha dabere na ntọala ezighi ezi. Nsogbu kasịnụ bụ nhichapu nke ihe akaebe na ọgwụ niile na akụkọ gbasara onwe ya nke na-akwado ọgwụgwọ ntụgharị. Ọ bụ ihe ama ama ama na ha abụọ dị adị n'ezie na ya mere nhapụ ha si na PHPJ nwere ike inwe otu n'ime nkọwa 2:
1.) ndị dere amaghị banyere ha na etinyeghị ha.
2.) Ndị dere ama ama banyere ha ma họrọ ịgụnye ha. Nkọwa yikarịrị
n'ihi na nke a ga-abụ nkwanye ùgwù megide ọgwụgwọ ntụgharị.
Nhọrọ ọ bụla sụgharịrị akụkọ ahụ na-abaghị uru dị ka akụkọ zuru oke, nke nwere ebumnuche banyere ịdị mma nke ntụgharị mgbanwe ma mee ka ọ bụrụ ihe na-ezighi ezi dịka ntọala maka usoro ọchịchị ọ bụla gbasara ọgwụgwọ ntụgharị.
Budata pdf ebe a> Na-egbochi Nsogbu, Promkwalite Ikpe Ziri Ezi: A critique - Dr Con Kafataris (Jan 2020)
Enwere ike ịnweta onye ntụgharị pdf dị n'ịntanetị ebe a> https://www.onlinedoctranslator.com/